Onu ogugu Ara nke Mobile Data Cons Na-eri Mgbe I Na-eme njem | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 13, 2014 Kelsey Cox
Kedu onye chọrọ akwụkwọ ozi mgbe ị nwere ike ịmepụta nke gị (n'efu) na Facebook na Instagram? Njem abụrụla nke ghọrọ usoro na smartphones abụrụla otu ngwa ngwa njem kachasị mkpa taa. N'afọ gara aga naanị, ọnụọgụ data mkpanaka rịrị elu, wee rịa okpukpu iri na abụọ karịa Internetntanetị niile na 12.
Pasent iri asatọ na asatọ nke ndị njem ezumike na-ahọrọ smartphones ha dị ka ọnụọgụ nke mbụ ga-enwerịrị ngwaọrụ mgbe ha nọ ezumike ma 59% nke ndị njem azụmaahịa na-eche na ha ga-eche na ha furu efu na-enweghị ekwentị ha otu izu. CNBC na Condé Nast achọpụtala na maka ndị njem, ihe omume 5 kachasị ewu ewu na ntanetị na-ejikọ site na email (75%), na-enyocha ihu igwe (72%), ịnweta map (66%), na-agbaso ozi ọma (57% ), na ịgụ nyocha ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ (45%). Ihe omume ndị a nwere ike ịchọta ngwa ngwa ọtụtụ gigabytes nke data otu ọnwa, na ọtụtụ ndị na-enweghị obi ụtọ ịnweta ọkọnọ na-akparaghị ókè, na-emecha kwụsị atụmatụ ha.
Enwekwara ohere puru iche nye ndi n’ile ahia n’azu ndi n’ebughari, ndi ohuru n’obodo ha biara. Ojiji mgbasa ozi ekwentị na oriri rịrị elu n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ma a ka nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa ndị na-anabatabeghị usoro a.
Mophie ewekọtara ihe ngosi data na-egosi anyị etu ndị njem data mkpanaka na-eri, ma ọ bụ azụmaahịa ma ọ bụ oge ezumike, yana mmemme ndị ịchọrọ ịtụle ịgbakwunye na ụlọ ahịa azụmaahịa gị.
Tags: mgbasa oziazụmahịadatainfographicmarketingMobile na Mbadamba ụrọnjem
Ndi Social Media erutewo ikike ohuru?
Jenụwarị 22, 2014 na 12:22 PM
Nnukwu data ịmara Kelsey. Ọ dị mkpa ịmata etu ndị njem si eji ekwentị iji mata ihe na ebe ha ga-eweta ọdịnaya yana ịghọta mkpa ọ dị iziga ibunye nnukwu faịlụ ndị na-eri atụmatụ data. Typesdị ahịa dị mkpa ịkwalite ahụmịhe (ntụgharị mmekọrịta) na iwe iwe onye ahịa ma ọ bụ ndị ahịa.